BYD Semiconductor ၏ IPO လျှောက်လွှာ ကို တရုတ် စတော့အိတ်ချိန်း မှအတည်ပြု သည် - Pandaily
Jan 28, 2022, 17:52ညနေ 2022/01/28 23:32:15 Pandaily
ရဲ့ရှန်ကျန်း စတော့အိတ်ချိန်း စာရင်း ကော်မတီBYD Semiconductor ၏ IPO လျှောက်လွှာ ကို ကြာသပတေး နေ့တွင် ပြန်လည်သုံးသပ် ပြီး အလားအလာ အရ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ထွန်း သ စ်စ ပါဝါ ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ ချစ်ပ် စက်မှု ထွန်းကား ခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင် ခြင်း စီမံကိန်း များ၊ ပါဝါ ဆီမီး ကွန် ဒတ် တာ နှင့် အသိဥာဏ် ရှိသော ထိန်းချုပ်မှု ကိရိယာ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း များတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ ရန်နှင့် ငွေ ဖြစ် လွယ် မှုအတွက် ယွမ် ၂. ၆ ၈၆ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ၂၂. ၅ သန်း) ကိုမြှင့်တင် ရန်ရည်ရွယ် ထား ကြောင်းဖော်ပြသည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ကုမ္ပဏီသည် ရှန်ကျန်း စတော့အိတ်ချိန်း သို့ အလားအလာ ကို တင်ပြခဲ့သည်။ China Securities Regulatory Commission (CSRC) မှထုတ်ပေး သော ဥပဒေအ ကြံ ပေး ကုမ္ပဏီသည် ဥပဒေပြု စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ခံနေရ သောကြောင့် ကုမ္ပဏီ၏ IPO ပြန်လည်သုံးသပ် မှုကို ဆိုင်းငံ့ထား ခဲ့သည်ဟု သတင်းများ ကဆိုသည်။ ဥပဒေ အကြံပေး ကုမ္ပဏီမှ စာရင်းစစ် အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန် ပြီးနောက် ဥပဒေ အကြံပေး ကုမ္ပဏီသည် IPO ကိုပြန်လည် စတင်ခဲ့ပြီး စက်တင်ဘာလ အစောပိုင်းတွင် စာရင်း စစ်ဆေးခဲ့သည်။
ကုမ္ပဏီကို ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ ၏အဓိက ကား ထုတ်လုပ်သူ BYD ၏စီးပွားရေး ယူနစ် အဖြစ် တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၂၀၂၀ အထိ တရားဝင် ခွဲထွက် ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အလားအလာ အရ BYD သည်လက်ရှိ တွင်၎င်း၏ အစုရှယ်ယာ ပိုင်ရှင် အနေဖြင့် ကုမ္ပဏီ ၏ရှယ်ယာ ၃၂၅ သန်း ကိုပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ထုတ်ပေး ခြင်းမပြုမီ ၎င်း ၏စုစုပေါင်း ရှယ်ယာ စုစုပေါင်း၏ ၇၂. ၃၀% ရှိသည်။ ထို့အပြင် BYD ကို တည်ထောင်သူ Wang Chuanfu သည်ဤ အစုရှယ်ယာ များကို အမှန်တကယ် ထိန်းချုပ် သူဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ကုမ္ပဏီသည် မော်တော်ယာဉ် အဆင့် စံချိန်စံညွှန်း များနှင့် ကိုက်ညီသော အကြီးဆုံး ပြည်တွင်း IGBT ထုတ်လုပ် သူဖြစ်သည်။ ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် များတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၁. ၃၄ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၂၁၀. ၈ သန်း) ၊ ၁. ၀ ၉၆ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁၇၂. ၄ သန်း) နှင့် ၁. ၄၄ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၂ ၂၆. ၅ သန်း) အသီးသီး ရှိခဲ့သည်။ အလားတူ ကာလအတွင်း ၎င်း၏ အသားတင် အမြတ် သည်ယွမ် ၁၀၄ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆. ၃ ၅၉ သန်း) ၊ ၈၅. ၁၁၄ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၃. ၃ ၈၈ သန်း) နှင့် ၅၈. ၆ ၃၂ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၉. ၂ ၂၂ သန်း) အသီးသီး ကျဆင်းခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ ကပြောကြားရာတွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းမှု သည်အဓိကအားဖြင့် စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် လုပ်ငန်း သစ် အတွက် ထောက်ပံ့ငွေ များ ကျဆင်း ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပြီး ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က စွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းမှု ၏အဓိကအကြောင်းရင်း မှာ စတော့အိတ်ချိန်း မက်လုံး များ ကိုအကောင်အထည်ဖော် ခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:BYD Semiconductor သည် 1200V power device driver chip BF1181 ကို လွတ်လပ်စွာ တီထွင် ခဲ့သည်
ထို့အပြင် ကုမ္ပဏီသည် ကြယ် နှင့် အရင်းအနှီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ မှုများစွာ ရရှိခဲ့သည်။ IPO စာရင်း မ ၀ င် မီ ကုမ္ပဏီသည် ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု နှစ်ခုကို ပြီးစီးခဲ့သည်။ အစောပိုင်းက ပြီးခဲ့သည့်နှစ် မေ လက Sequoia China Investment Management Co., Ltd., CICC Capital, SDIC Innovation Investment Management Co., Ltd. နှင့် Sequoia Capital အပါအ ၀ င် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အဖွဲ့အစည်း ၁၄ ခုကို Round A ငွေကြေးထောက်ပံ့ မှုအတွက် စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး စုစုပေါင်း ယွမ် ၁. ၉ ဘီလီယံ ရရှိခဲ့သည်။
ရက်ပေါင်း ၂၀ မပြည့် မီ တွင် ကုမ္ပဏီသည် ယွမ်သန်း ၈၀၀ (ဒေါ်လာ ၁၂၅ ၈. ၄ သန်း) တန်ဖိုးရှိ A + ရန်ပုံငွေ ကိုလျင်မြန်စွာ ပြီးစီးခဲ့သည်။ SK Group, Hubei Xiaomi Changjiang Industrial Investment Fund Management Co., Ltd. China Merchants International, Lenovo Group Co., Ltd., CITIC Private Equity Fund Management, Semiconductor Manufacturing International, SAIC Capital, BAIC Capital, Shenzhen Huaqiang စသည့် မဟာဗျူဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူ ၃၀ ကိုဤ အလှည့် တွင် မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ဤ ဘဏ္ two ာရေး နှစ် ခုတွင် ကုမ္ပဏီ သည်စုစုပေါင်း ယွမ် ၂. ၇ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ၂၄. ၇ သန်း) ကို ပြီးစီး ခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လွန် ကာလ တန်ဖိုး မှာယွမ် ၁၀. ၂ ဘီလီယံ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆၀. ၅ သန်း) ဖြစ်သည်။